नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रबीच मिलाप भएको छ । यो मिलापबाट नयाँ कम्युनिष्ट पार्टी ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ गठन भएको छ । जेठ ३ गते एमालेका तात्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र सङ्गठन विभाग प्रमुख जीवराज......
हाम्रो नयाँ वर्ष २०७५ को आगमन भएको छ । अघिल्लो वर्षझैँ नयाँ वर्षमा पनि आफ्ना शुभचिन्तकलाई शुभ, सुख र समृद्धिको कामना गरे नेपालीले । हरेक वर्ष नयाँ उत्साह, योजना तथा उमङ्गका साथ नयाँ वर्ष मनाउने गरिन्छ ।......
सङ्घीय संविधानअनुसार देशमा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि अब यसको अभ्यास सुरू भएको छ । देशमा लामो राजनीतिक अस्थिरतापछि अहिले देश यो बाटोमा गएको हो । संविधानसभाले देशमा सङ्घीय संरचनाको व्यवस्थासहितको सङ्घीयता निर्माण गरी २०७२ असोज ३ गते......
नेपालीका ठूला भनिएका चाडपर्वमध्ये दशैँ हामीबाट यो वर्षका लागि बिदा भएको छ भने तिहार सङ्घारमा छ । यति बेला तिहारको माहोलले छोइसकेको छ आम नेपालीलाई । चाडपर्वसँगै देश चुनावमय भएको छ । स्थानीय निकायको चुनाव तीन चरणमा......
चाडपर्वको मौसम सुरु भइसकेको छ । चाडपर्वको समयमा बजार अनुगमनले पनि तीव्रता पाएको छ । सरकारले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर बजार अनुगमन गर्ने गरेको छ । कालोबजारी र मिसावट गर्नेलाई कुनै पनि शर्तमा नछाड्ने आपूर्ति मन्त्रालयले घोषणा......
अर्थशास्त्रको क्षेत्र धेरै व्यापक छ । विज्ञान र प्रविधिमा भएको चमात्कारिक विकासले अर्थशास्त्रको क्षेत्रमा पनि व्यापक क्रान्ति ल्याइदिएको छ । त्यस कारण पुराना अर्थशास्त्रीहरुले गरेका अर्थशास्त्रको परिभाषाले आजको विकसित अर्थशास्त्रको क्षेत्रलाई समेट्न सक्दैन । तर पनि आजका......
लामो समयको अन्तरालपछि देशमा स्थानीय निकायको निर्वाचन भइरहेको छ । प्रथम चरणको निर्वाचन वैशाख ३१मा सम्पन्न भयो । यस निर्वाचनको मतपरिणाम भरतपुर महानगरपालिकाबाहेक अन्य सबै ठाउँको सार्वजनिक भइसकेको छ । जसमा नेकपा (एमाले) अग्रस्थानमा देखिएको छ । पहिलो......
देशमा गणतन्त्र आएको दशक हुन लाग्यो । संविधानसभाको पहिलो बैठकले वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । गणतन्त्र स्थापनापछि पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न सकेन र दोस्रो संविधानसभाले वि.सं. २०७२......
२०७३ साल हामीबाट बिदा भएको छ । अर्को नयाँ वर्षमा हामी प्रवेश गरेका छौं । देशको राजनीतिको कुरा गर्ने हो भने सत्ता स्वार्थमा नै केन्द्रित भए प्रमुखदलहरु ०७३मा । अन्योल र अनिश्चय ०७३ नयाँ वर्ष २०७४ लाई......
नेपाली जनताले देशको शान्ति र समृद्धिका लागि भन्दै पछिल्लो आन्दोलनमा होमिएको पनि एक दशकभन्दा बढी भयो । देशमा परिवर्तन त भयो तर हामी परिवर्तनसँगै कहिल्यै बाहिर निस्कन नसक्ने दलदलमा त फसेनौ भन्ने कुरा पछिल्ला घटनाक्रमले......